Cudurka Daacuunka oo ardayda Itobiyanka ah ee Jaamacada Jigjiga Fara baas kuhaya. | ogaden24
Cudurka Daacuunka oo ardayda Itobiyanka ah ee Jaamacada Jigjiga Fara baas kuhaya.
Cudurka Daacuun caloolaha ayaa lagu soo waramayaa inuu siwayn ugu dhex faafay Ardayda wax kabarata Jaamacada magaalada Jigjiga, waxaana 24-kii saac ee lasoo dhaafay u dhintay 2-kamida Ardaydii xanuunku soo ritay.
Sida uu kusoo waramayo wariyaheena magaalada Jigjiga 41-arday ayuu xanuunku soo ritay 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana Labadii Galin ee shalay u Geeriyooday 2-kamida Ardaydii Jaamacada oo Wiil iyo Gabadh kala ah, waxaana haatan xanuunkaasi la il daran 39-arday oo kale.
2-da arday ee xanuunkani u dhimatay ayaa ah ardayda laga keenay dhinaca dalka Itobiya sidoo kale dhamaan ardayda uu xanuunkani hayo ayaa iyaguna ah dhalinyarada kasoo Jeeda dhinaca dalka Itobiya ee wax kabarta Jaamacada magaalada Jigjiga.
Xanuunkani oo 2-dii bilood ee lasoo dhaafay kadhex jiray Jaamacada ayaa markan soo ritay tiradii ugu badnayd waxaana aad looga cabsi qabaa in magaalada oo Todobaadyadan karoonayd uu mar kale kadilaaco, maadaama aysan jirin cid xakamaynaysa ardada kuxaraysan Jaamacada.